The Mask Singer Myanmar | Telenor Myanmar
SMS ပေးပို့ရန် နံပါတ် :
ပြိုင်ပွဲဝင် နံပါတ် :
M10 to M18
ပေးပို့ရန် ပုံစံ :
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် <အနုပညာရှင်နံမည်> (နှစ်သက်ရာ မျက်နှာဖုံးရှင်နံပါတ်နှင့် ခန့်မှန်းအမည်)
နှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် နှင့် ကိုယ်ခန့်မှန်းထင်သည့် အနုပညာရှင် အမည်ကို 6060 သို့ ပေးပို့ပြီးတယ်လီနောမှ ခန့်မှန်းမဲပေးခြင်း အောင်မြင်ကြောင်း စာတိုကို ပြန်လည်လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် (နှစ်သက်ရာ မျက်နှာဖုံးရှင်နံပါတ်)
နှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ကို 6060 သို့ ပေးပို့ပြီး တယ်လီနောမှ ခန့်မှန်းမဲပေးခြင်း အောင်မြင်ကြောင်း စာတိုကို ပြန်လည်လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
M10 to M18 (ပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် မျက်နှာဖုံးဖွင့်ပြလိုက်ရသော သူများ၏ နံပါတ်များသာ မဲပေးခန့်မှန်းရန် အကျုံးဝင်ပါသည်။)
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် (ပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် မျက်နှာဖုံးဖွင့်ပြလိုက်ရသော သူများ၏ နံပါတ်များသာ မဲပေးခန့်မှန်းရန် အကျုံးဝင်ပါသည်။)
နှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် နှင့် ကိုယ်ခန့်မှန်းထင်သည့် အနုပညာရှင် အမည်ကို 6060 သို့ ပေးပို့ပြီး တယ်လီနောမှ ခန့်မှန်းမဲပေးခြင်း အောင်မြင်ကြောင်း စာတိုကို ပြန်လည်လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
အကန့်သတ်မရှိ Vote လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M10
ငြိမ်းချမ်းမှု နဲ့ ဘဝရဲ့ရိုးရှင်းမှုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဒေါင်း။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M11
ချစ်စရာကောင်းပြီး ချိုသာတဲ့ အသံလေးနဲ့ အားလုံးကို လန်းဆန်းမှုတွေပေးသွားမယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M12
မြင့်မြတ်ကြီးမားပြီး လူတိုင်းအပေါ် ပါဝါရှိတဲ့လူ။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M13
စိတ်ထားကောင်းပြီး ကလေးတွေကိုလဲချစ်တတ်ပြီး လူတိုင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ချင်တဲ့ Piggy ။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M14
တခါတလေလဲ ပြောရခက်ပြီး တခါတလဲ ချစ်စရာကောင်းပြန်တယ် ဒါပေမဲ့လဲ လူတိုင်းက သူ့ကိုချစ်ကြပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M15
အလင်း အရောင် နဲ့ မြို့တွေမှာနေရတာကြိုက်ပြီး ခရီးသွားရတာနှစ်သက်တဲ့ သူမ။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M16
ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေကို အရည်ပျော်သွားအောင် လုပ်ဆောင်မဲ့ ဖြတ်လတ်လန်းဆန်းတဲ့ သူမ။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M17
အရာရာတိုင်းကို ချွေးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြ။
ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် - M18
စွမ်းအားတွေပေါ်ရူးသွပ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်တတ်တဲ့ကျီးကန်းလေးဟာ အချစ်မှာတော့ နူးညံ့သိမ်မွေ့နေပြန်တယ်။
တယ်လီနောမြန်မာ၏ pre-paid, post-paid ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူများသာ ဤ Mask Singer ပြိုင်ပွဲ၏ Voting အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ် အစမှအဆုံးအထိ SMS အစောင်ရေအကန့်အသတ်မရှိပေးပိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ခန့်မှန်းပေးပို့သည့် SMS အတွက် သင့်တော်သောကျသင့်ငွေအားသင့်ထံမှ ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ ကျသင့်ငွေပမာဏမှာအချိန်နှင့် အမျှ အပြောင်းအလဲရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤ အစီစဉ်တွင် ပါဝင် ခန့်မှန်းသူများမှာ Mask Singer Voting systems မှတဆင့် The Mask Singer Voting Programme ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းခန့်မှန်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။
1.	ခန့်မှန်းပေးပို့သူများမှ အောက်ပါအချက်များအတွက် ခန့်မှန်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
-	မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ဖျော်ဖြေနေသည့် ပြိုင်ပွဲဝင် အဆိုရှင်မှာမည်သူဖြစ်သလဲ? (Who is Behind the mask?)
-	ဤပြိုင်ပွဲတွင် နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိမည့် ဖျော်ဖြေသူမှာမည်သူဖြစ်သလဲ? (Who will beachampion (final)?)
-	မည်သည့် မျက်နှာဖုံးအဆိုရှင်အားစင်ပေါ်တွင် ပြန်လည်ဖျော်ဖြေစေချင်ပါသလဲ? (Who you want to be back on the stage?)
ဤ အစီအစဉ် ပွဲစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် အဖြေအမှန်ဆုံးနှင့် ခန့်မှန်းပေးပို့မှုအများဆုံးသူများအထဲမှ ကံထူးရှင် (Winner) အားရွေးချယ်မည်ပြီးဆုများပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကံထူးရှင်များအတွက် ပေးအပ်မည့် ဆုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- ဤအစီစဉ်၏ နောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိမည့် အဆိုရှင်ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်သူအားပေးအပ်မည့် 16.6GM ရှိ ရွှေပြားဆု (၁) ဆု
- မျက်နှာဖုံးနိုင်ငံကျော်အဆိုရှင် တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးနှင့်အတူတည်ခင်းညစာစားခွင့် နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်တို့ပါဝင်သောဆု (၃၀)
ခန့်မှန်းပေးပို့ခြင်းမှန်ကန်သူအရေအတွက်မှာမူလ The Mask Singer Myanmar အဖွဲ့၏ သက်မှတ်ထားသည့် အရေအတွက်ထက်များနေပါကခန့်မှန်းဖြေဆိုချက်မှန်ကန်ပြီး SMS အစောငျရအေမြားဆုံးပေးပို့သူများထဲမှ ကံထူးရှင်(winner)အားရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
မျက်နှာဖုံးနိုင်ငံကျော် အဆိုရှင်တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးနှင့်အတူတည်ခင်းညစာစားသုံးခွင့်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်တို့ ရရှိသောကံထူးရှင်များအားပေးအပ်သောကံစမ်းမဲတစ်စောင်လျှင် ကံထူးရှင်တစ်ဦးသာတက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ကံထူးရှင်များအားကံစမ်းမဲကာလပြီးဆုံးချိန်မှ တပတ်အတွင်းဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်တော် သည်ဟုထင်မြင်သည့်အတိုင်းမည်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကိုမဆိုရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအားနောက်ထပ် ကံထူးရှင်များသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆုလက်ဆောင်များအားလဲလှယ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးမည် မဟုတ်ပေ။
ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီးဆုလက်ဆောင်ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကံထူးရှင်မှ ၄င်း၏ နာမည်၊ ရုပ်ပုံတို့အားအသုံးပြု၍ Electronic media နှင့် print media တို့တွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လွှင့်တ င်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အခြားြေကာ်ငြာလက်ကမ်းစာစောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပိုစတာတစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ် စေရိုက်နှိပ် ဖော်ပြခြင်းတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်တော်သလိုအသုံးပြုခြင်းအားအခြားအပိုအခကြေးငွေပေးအပ်ရန် မလိုဘဲလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီသည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
တယ်လီနောမြန်မာနှင့် The Mask Singer Myanmar တို့၏ အချိန်ပြည့်၊ အချိန်ပိုင်း၊ ယာယီ၊ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများ၊ အင်းဂျင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများ (Service Provider) ၊ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသောမိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ (Business Partner) နှင့် ၄င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အခြားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ မီဒီယာ၊ Sponsors၊ PR Agencies နှင့် ၄င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများမှ ဤအစီစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီးဆုလက်ဆောင်များကံထူးခွင့် မရှိပေ။
နည်းပညာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမှားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ ထိန်းချုပ်ရန် မစွမ်းသာသောအခြေအနေများအစရှိသည်တို့ ကြောင့် ဤအစီအစဉ် တွင် ပါဝင် ခန့်မှန်းသူများအပေါ် သက်ရောက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုတစုံတရာရှိခဲ့ပါကအဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှုများအား ကျွန်ုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူခြင်းမပြုရ။
ခန့်မှန်းပေးပို့သူများသည် ခန့်မှန်းသည့် SMS အားပေးပို့ပြီးဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပေးပို့မှုပုံစံနှင့် The Mask Singer Myanmar မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားသိရှိနားလည်ပြီးလိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားချိုးဖောက်သောသူတို့အား ကျွန်ုပ်တို့မှ ဤအစီစဉ်တွင် ပါဝင် ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်၊ ဆုလက်ဆောင်များပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်များအပြည့်အဝရှိသည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါက The Mask Singer Myanmar ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
The Mask Singer Myanmar သည် စည်းကမ်းချက်များကိုအခါအားလျော်စွာကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။